आइतबार अगस्त 22, 2021 |
आइतबार अगस्त 22, 2021
विषय — विषय- मन
वर्ण पाठ: स्वर्ण पाठ: दानियल 12 : 3
“"ज्ञानी-शिक्षकहरू उज्जवल आकाश झैं चम्कनेछन्। अनि तिनीहरू तिनीहरूलाई सत्यको मार्गमा सदा-सर्वदाको निम्ति डोर्याउने ताराहरू झैं हुनेछन्।"”
उत्तरदायी पढाइ: हितोपदेश 9: 9, 10	•	उपदेशक 9: 13-15	•	हितोपदेश 3: 13, 17
1. हितोपदेश3: 5-8
2. अय्यूब 22 : 21, 22
3. अय्यूब 23 : 10 (उसलाई थाहा छ), 14
4. दानियल2: 1, 2, 4,5(ला 4th ,),6(ला :), 10 (ला :), 12 (ला ,), 16, 19, 23, 27 (ला 2nd,), 28 (तेथे) (ला .), 46 (राजाला), 47 (उत्तर दिले), 48
1 आफ्नो शासनकालको दोस्रो वर्षमा नबूकदनेस्सरले एउटा सपना देखे। सपनाले उनलाई भयभीत बनायो अनि उनी सुत्न सकेनन्।
2 राजाले आफ्ना ज्ञानी मानिसहरूलाई बोलाए तिनीहरू जादु-टुना गर्थे। सपनाको अर्थ व्याख्या गर्न ताराहरू हेर्थे। तिनीहरू त्यसो गर्थे किनभने भविष्यमा जे घट्नेवाला छ, त्यो पहिले नै संकेत दिन सक्थे। राजाले तिनीहरूबाट यही चाहन्थे कि उनले देखेको सपनाको अर्थ तिनीहरूले भन्न सकुन्। तिनीहरू आए र राजाको सामु उभिए।
4 त्यस विषयमा कल्दीहरूले अरामी भाषामा बोल्दै उत्तर दिए, महाराज अमर रहुन! हामी तपाईंका सेवकहरू हौं। तपाईंले आफ्नो सपना हामीलाई बताउनु होस् अनि हामी तपाईंलाई त्यसको अर्थ बताउँछौं।
5 यसपछि राजाले कल्दीहरूलाई भने, होइन! त्यो सपना के थियो, यो पनि तिमीले बताउँनु पर्छ अनि त्यो सपनाको अर्थ के हो, यो पनि तिमीले बताउँनु पर्छ। यदि तिमीले यस्तो गर्न सकेनौ भने म तिमीलाई टुक्रा-टुक्रा पार्नेछु।
6 तर तिमीले मेरो सपना बताएर त्यसको व्याख्या गरिदियौ भने म तिमीलाई धेरै उपहारहरू, आदार प्रदान गर्नेछु। अब मेरो सपना र त्यसको व्याख्या गर।
10 कल्दीहरूले राजालाई उत्तर दिँदै भने, हे महाराज, तपाईंले जे भन्नु हुँदैछ त्यो गर्न सक्ने मानिस यस पृथ्वीमा केही छैन।
12 जब राजाले यो कुरा सुने, तिनी साह्रै रिसाए।
16 जब दानियलले यो कुरा सुने उनले राजासँग गएर बिन्ति गरे कि अधिक समय दिइयोस्। त्यस पछि उनले राजालाई उनको सपना र त्यसको अर्थ बताई दिनेछन्।
19 रातको समय परमेश्वरले दानियललाई दर्शनको गुप्त बताई दिनुभयो। त्यसपछि स्वर्गका परमेश्वरको स्तुति गरे।
23 हे मेरो पिता-पुर्खाहरूका परमेश्वर, म तपाईंलाई धन्यवाद दिन्छु, अनि तपाईंको गुणगान गाउँछु। तपाईंले नै मलाई ज्ञान र शक्ति दिनुभयो। जुन कुरा हामीले सोध्यौं त्यसको रहस्य तपाईंले नै बताउँनु भयो। तपाईंले हामीलाई राजाको सपनाको विषयमा बताउँनु भयो।
27 दानियलले राजालाई उत्तर दिए।
28 … स्वर्गमा एउटा यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसले गुप्त रहस्यहरू बताउँन सक्नुहुन्छ। परमेश्वरले राजा नबूकदनेस्सरलाई अब के हुनेवाला छ यो दर्शाउनको लागि सपना देखाई दिनुभयो।
46 यसपछि राजा…।
47 …फेरि दानियललाई भने, मलाई निश्चिन्त पूर्वक ज्ञान भएकोछ कि तिम्रो परमेश्वर सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनि शक्तिशाली हुनुहुन्छ। उहाँ सबै राजाहरूको परमप्रभु हुनुहुन्छ। अनि जुन कुरा कसैले बताउँन सक्तैन त्यो गुप्त कुरा पनि उहाँले बताई दिनुहुन्छ।
48 यसपछि राजाले दानियललाई सम्मान पूर्वक आफ्नो राज्यको महत्वपूर्ण पदमा नियुक्ती गरे अनि धेरै बहुमूल्य उपहारहरू पनि दानियलाई दिए। दानियललाई सम्पूर्ण बाबेल प्रदेशको शासक नियुक्ती गरे अनि दानियललाई बाबेलको सबै ज्ञानी मानिसहरूको प्रधान बनाइदिए।
5. यशैया 50 : 4, 7, 10
6. मत्ती4: 23
7. मत्ती5: 1, 2
8. मत्ती 25 : 1-13
1 त्यसबेला स्वर्गको राज्य दशजना कन्याहरू जस्तै हुनेछ, जो आ-आफ्ना दियो लिएर दुलहा पर्खन गए।
6 मध्यरातमा कोही करायो, दुलहा आउँदैछन्। उनलाई भेटन बाहिर आऊ।
7 तब सबै कन्याहरू ब्युँझिए। तिनीहरूले आ-आफ्ना दीयोहरू तयार पारे।
8 तब बुद्धिहीन कन्याहरूले बुद्धिमती कन्याहरूलाई भने, हामीलाई तिमीहरूको केही तेल देऊ किनभने हाम्रोमा भएको तेल सकियो अनि हाम्रा दीयोहरू निभ्दैछन्।
9 बुद्धिमती कन्याहरूले जवाफ दिए, होइन! किनभने हाम्रोमा भएको तेल तिमीहरू सबैका लागी पर्याप्त हुँदैन। बरू, तिमीहरू आफै पसलमा गएर आफ्नो लागि तेल किन, त्यो असल हुन्छ।
10 त्यसपछि ती पाँचजना बुद्धिहीन कन्याहरू तेल किन्न गए। जब तिनीहरू जाँदै थिए, त्यसैबेला दुलहा आइपुगे अनि तयार रहेका सबै कन्याहरू दुलहासंग विवाहको भोजमा सामेल भए। त्यसपछि ढोका थुनियो अनि ताला लगाइयो।
11 केही समयपछि अरू कन्याहरू आए। तिनीहरूले भने, स्वामी, हामीलाई ढोका खोलिदिनु होस् हामीलाई पनि भित्र पस्न दिनहोस्।
12 दुलहाले जवाफ दिए, तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु। म तिमीहरूलाई चिन्दिनँ।
13 यसकारँ सँधै सर्तक बस। तिमीहरू जान्दैनौ कि मानिसको पुत्र कुन दिन वा कुन समयमा आउने हुन्।
9. कलस्सी 1 : 9-13
1. 373 : 15-16 (ला ,)
"परमप्रभुलाई आदर गर्नुको अर्थ ज्ञान प्राप्त गर्ने पहिलो पाइलो हुन्छ।"
वास्तविकता र यसको विज्ञान मा भएको क्रम बुझ्नको लागी, तपाइँ ईश्वर लाई वास्तव मा सबै को ईश्वरीय सिद्धान्त को रूप मा गणना गरेर शुरू गर्नु पर्छ। आत्मा, जीवन, सत्य, प्रेम, एक को रूप मा गठबन्धन, - र भगवान को लागी शास्त्रीय नाम हो। सबै पदार्थ, बुद्धि, बुद्धि, अस्तित्व, अमरत्व, कारण, र प्रभाव ईश्वर को हो। यी उहाँका गुण हुन्, अनन्त ईश्वरीय सिद्धान्त, प्रेम को शाश्वत अभिव्यक्तिहरु। कुनै ज्ञान बुद्धिमान छैन तर उहाँको बुद्धि छ; कुनै सत्य सत्य छैन, कुनै माया प्यारो छैन, कुनै जीवन जीवन हैन परमात्मा हो; कुनै राम्रो छैन, तर राम्रो भगवान प्रदान गर्दछ।
ईश्वरीय आध्यात्मिकता, आध्यात्मिक समझ को लागी प्रकट गरीएको छ, स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि सबै मन हो, र त्यो मन भगवान हो, सर्वव्यापकता, सर्वव्यापकता, सर्वज्ञता, - त्यो हो, सबै शक्ति, सबै उपस्थिति, सबै विज्ञान। तेसैले सबै वास्तविकता मा मन को अभिव्यक्ति हो।
मानिस, अमर मन द्वारा शासित, सधैं सुन्दर र भव्य छ। प्रत्येक सफल वर्ष ज्ञान, सौन्दर्य, र पवित्रता प्रकट गर्दछ।
मन सबै आन्दोलन को स्रोत हो, र त्यहाँ कुनै जडत्व मंद वा यसको सदा र सामंजस्यपूर्ण कार्य जाँच गर्न को लागी छैन। मन एउटै जीवन, प्रेम, र बुद्धि "हिजो, र आज, र सदाको लागी हो।" पदार्थ र यसको प्रभाव - पाप, रोग, र मृत्यु - नश्वर दिमाग को राज्य हो जुन कार्य, प्रतिक्रिया, र त्यसपछि एक रोक्न को लागी आउँछ। ती मनका तथ्य होइनन्। उनीहरु विचार होइनन्, तर भ्रम हुन्। सिद्धान्त निरपेक्ष छ। यो कुनै त्रुटि को स्वीकार गर्दछ, तर बुझ्ने मा टिक्दछ।
मन जरूरी शैक्षिक प्रक्रियाहरु मा निर्भर छैन। यो आफैंमा सबै सौन्दर्य र कविता, र उनीहरुलाई व्यक्त गर्ने शक्ति को मालिक छ। आत्मा, भगवान, सुनेको छ जब इन्द्रियहरु मौन छन्। हामी सबै भन्दा धेरै गर्न को लागी सक्षम छौं। आत्मा को प्रभाव वा कार्य एक स्वतन्त्रता प्रदान गर्दछ, जो सुधार को घटना र untutored ओठ को उत्तेजना को व्याख्या गर्दछ।
पुरातन अगमवक्ताहरु एक आध्यात्मिक, निराधार दृष्टिकोण बाट दुरदृष्टि र कल्पना को लागी गल्ती तथ्य को भविष्यवाणी गरेर प्राप्त गरेनन्, - शारीरिक र मानव विश्वास को आधार बाट भविष्य को भविष्यवाणी। जब विज्ञान मा पर्याप्त रूप मा उन्नत हुन को सत्य संग सद्भाव हुन को लागी, पुरुषहरु अनैच्छिक रूप मा द्रष्टा र अगमवक्ता बन्छन्, राक्षसहरु, आत्माहरु, वा demigods द्वारा नियन्त्रित छैन, तर एक आत्मा द्वारा। यो सदा वर्तमान, परमात्मा मन, र विचार को जो यस मन संग सम्बन्ध मा छ, विगत, वर्तमान, र भविष्य जान्न को विशेषाधिकार छ।
हुनुको विज्ञान संग परिचित हुन हामीलाई ईश्वरीय मन संग धेरै हद सम्म कम्युन गर्न को लागी सक्षम बनाउँछ, भविष्यवाणी गर्न र घटनाहरु जो सार्वभौमिक कल्याण को चिन्ता, ईश्वरीय प्रेरित हुन को लागी, - हो, fetterless मन को दायरा सम्म पुग्न को लागी।
यो बुझ्न को लागी कि मन अनन्त छ, शरीर द्वारा बाध्य छैन, आवाज वा दृष्टि को लागी कान र आँखा मा निर्भर छैन न त मांसपेशिहरु र हड्डी हड्डी मा स्थानान्तरण को लागी, मन विज्ञान को लागी एक कदम हो जसद्वारा हामी मानिस को प्रकृति र अस्तित्व बुझ्दछौं।
सबै हामी आत्मा को सही ढंगले जान्दछौ भगवान, ईश्वरीय सिद्धान्त बाट आउँछ, र ख्रीष्ट र ईसाई विज्ञान को माध्यम बाट सिकेका छौं। यदि यो विज्ञान राम्ररी सिकेको छ र ठीक पचाएको छ, हामी खगोलविद्ले ताराहरु पढ्न वा एक ग्रहण को गणना गर्न सक्छौं भन्दा सच्चाई जान्न सक्छौं।
यो मन पढाई clairvoyance को विपरीत छ। यो आध्यात्मिक अन्तर्निहित को रोशनी हो जो आत्मा को क्षमता को प्रदर्शन गर्दछ, भौतिक भावना को होइन। यो आत्मा-भावना मानव दिमागमा आउँछ जब पछिल्लो दिव्य दिमागमा पैदा हुन्छ।
त्यस्ता अन्तर्ज्ञानले जो पनी प्रकट गर्दछ र सद्भाव कायम गर्दछ, एक लाई राम्रो गर्न को लागी सक्षम बनाउँछ, तर नराम्रो छैन।
यो रेकर्ड गरिएको छ कि येशू, उनी एक पटक आफ्ना विद्यार्थीहरु संग यात्रा को रूप मा, "उनीहरुका विचारहरु जान्दथे," - उनीहरुलाई वैज्ञानिक पढ्नुहोस्। उस्तै तरीकाले उसले रोगलाई बुझ्यो र बिरामीलाई निको पारे।
आजको अगमवक्ता मानसिक क्षितिज मा यी समय को संकेत देख्छन्, ईसाई धर्म को पुनरुत्थान जो बिरामी लाई निको पार्छ र त्रुटि लाई नष्ट गर्दछ, र अरु कुनै चिन्ह दिइनेछैन। शरीर को बाहेक दिमाग बाट बचाउन सकिदैन।
रोगको कुनै बुद्धि हुदैन। अनजानमा तपाइँ आफैंलाई कष्ट भोग्नु पर्छ। यो को समझ तपाईं यो आत्म वाक्य कम्युट गर्न को लागी सक्षम हुनेछ, र सत्य संग हरेक परिस्थिति लाई पूरा गर्नुहोस्। रोग दिमाग भन्दा कम छ, र मनले यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ।
तथाकथित मानव दिमाग बिना, त्यहाँ प्रणाली को कुनै भड़काउने वा नराम्रो कार्य हुन सक्दैन। त्रुटि हटाउनुहोस्, र तपाइँ यसको प्रभावहरु लाई नष्ट गर्नुहुन्छ।
रोग मन को साम्राज्य को विवाद गर्न को लागी एक बुद्धि हैन या मन को पराजित गर्न को लागी र सरकार लाई आफ्नै हात मा लिन को लागी छैन। बिरामी ईश्वर द्वारा दिइएको हैन, न त एक आत्म-गठित भौतिक शक्ति हो, जसले मन संग विवेकपूर्वक सामना गर्दछ र अन्त मा यसलाई जित्छ। भगवान जीवन को असक्षम गर्न वा कलह को एक लामो र चिसो रात संग सद्भाव शान्त गर्न को लागी शक्ति संग कहिल्यै दिईएको छैन। यस्तो शक्ति, ईश्वरीय अनुमति बिना, अकल्पनीय छ; र यदि यस्तो शक्ति ईश्वरीय निर्देशित हुन सक्छ, यो कम बुद्धि प्रकट हुन्छ हामी सामान्यतया मानव सरकारहरु मा प्रदर्शित को तुलना मा।
संसार को वास्तविक क्षेत्राधिकार मन मा छ, प्रत्येक प्रभाव को नियन्त्रण र दिव्य मन मा निहित को रूप मा सबै कारण को मान्यता।
11. 492 : 7-21 (ला 2nd .), 25-28
हुनु भनेको पवित्रता, सद्भाव, अमरता हो। यो पहिले नै प्रमाणित भइसकेको छ कि यो ज्ञान, सानो डिग्री मा पनि, नश्वर को शारीरिक र नैतिक स्तर माथि उठाउनेछ, दीर्घायु बढाउनेछ, शुद्ध र चरित्र उचाल्नेछ। यस प्रकार प्रगति अन्ततः सबै त्रुटि नष्ट, र प्रकाशमा अमरता ल्याउनेछ। हामी जान्दछौं कि एक कथन राम्रो साबित भयो सही हुनु पर्छ। नयाँ विचार लगातार भुइँ प्राप्त गर्दै छन्। यी दुई विरोधाभासी सिद्धान्तहरु - त्यो कुरा केहि हो, वा त्यो सबै दिमाग हो - जग्गा को विवाद हुनेछ, जब सम्म एक विजेता को रूप मा स्वीकार गरीन्छ। आफ्नो अभियानको बारेमा चर्चा गर्दै, जनरल ग्रान्टले भने: "म यो लाइन मा लड्न को लागी प्रस्ताव गर्दछु, यदि यो सबै गर्मी लाग्छ।" विज्ञान भन्छ: सबै मन र मन को विचार हो। तपाइँ यो लाइन मा यो बाहिर लड्नै पर्छ। पदार्थ तपाइँ कुनै सहायता बर्दाश्त गर्न सक्नुहुन्छ।
भगवान मन हुनुहुन्छ, र भगवान अनन्त हुनुहुन्छ; त्यसैले सबै मन हो। यो कथन मा हुनुको विज्ञान रहन्छ, र यो विज्ञान को सिद्धान्त ईश्वरीय हो, सद्भाव र अमरत्व को प्रदर्शन।